Ny fanjakana amin'izao fotoana izao amin'ny automatisation marketing B2B | Martech Zone
Ny fanjakana ankehitriny an'ny B2B Marketing automation
Alahady, May 31, 2015 Friday, May 29, 2015 Douglas Karr
Vola azo Automated marketing B2B ny rafitra dia nitombo 60% ka hatramin'ny $ 1.2 Miliara tamin'ny 2014, raha ampitahaina amin'ny fiakarana 50% tamin'ny taona lasa. Tao anatin'izay 5 taona lasa izay dia nitombo 11 heny ny indostria satria ny orinasa dia manohy mahita ny lanjany amin'ireo endri-javatra lehibe atolotry ny automatisation marketing.
Rehefa mihamatotra haingana ny indostria, ny fototra iorenan'ny sehatra marketing ho azy nifanarahana tsara ary fomba fanao tsara indrindra amin'ny fampiharana ny automatisation marketing manohy manamafy.
Ity infographic avy amin'ny Uberflip, Ny revolisiona ho an'ny marketing automatique, manome sary miavaka momba ny fanjakan'ny B2B Marketing Automation indostria ankehitriny.
Tombony 5 ambony amin'ny automatisation B2B Marketing
Mitombo ny taranaka mitarika
Fanantenanao tsara kokoa sy hitarihanao fahitana
Fampitomboana ny fahombiazany
Dingana fanatsarana ny firakofana, ny fikolokoloana ary ny fizarana
Fanatsarana ny kalitaon'ny firaka
8% monja amin'ireo mpivarotra B2B amin'ny ambaratonga ambony no nilaza fa tsy mandaitra ny ezak'izy ireo amin'ny automatisation marketing - ary vonona ny hanao filokana aho fa tsy noho ny vahaolana izany, fa noho ny fampiharana. Ireo dia rafitra saro-pantarina misy faritra maro mihetsika izay mitaky paikady sy atiny lehibe handroahana azy ireo. Heveriko fa be loatra ny orinasa mifantoka amin'ny valin'ny varotra ampiroboroboan'ny sehatra ary tsy mifantoka loatra amin'ny enti-manana sy ny fotoana lany hahatongavana tany.
Tags: Statistika 2015automatique marketing b2btombontsoa ho an'ny marketing amin'ny b2bfahombiazan'ny automatisation b2b marketingSary torohayautomation marketinginfographic automatisation marketingantontan'isaby MediaWikiuberflipinfografika uberflip
InVision: Prototyping, fiaraha-miasa ary workflow
Ahoana ny fampiasana Google Analytics hanatsarana ny ezaka ara-barotra